गठिया तथा पार्किन्सन रोगको लागि फोन प्रयोग गर्न सजिलो - Konnekt
यो Konnekt वीडियोफोन एक अविश्वसनीय सरल पार्किन्सनको / गठिया फोन हो जुन गठिया, पार्किन्सन, MND, ALS, CIDP, CP, MS, कार्पल टनेल सिन्ड्रोम, वा उनीहरूको हात प्रयोग गर्न कठिनाई भएकाहरूका लागि आदर्श हो। भिडियोफोनसँग लिफ्ट वा होल्ड गर्न कुनै ह्यान्डसेट छैन। त्यहाँ कुनै भौतिक बटन धक्का छैन। योसँग कुञ्जीपाटी छैन, माउस छैन र रिमोट कन्ट्रोल छैन। उन्नत १-इन्च टचस्क्रिनले तपाईका साथीहरूको नामको साथ निजीकृत HUGE लाइट-प्रेस कल बटनहरू सुविधा दिन्छ, र संचालन गर्न अविश्वसनीय सजिलो छ - एक हल्लिएको वा अस्थिर हातको साथ पनि। कल गर्न वा जवाफ दिन केवल एउटा टच।
हाम्रो भिडियोफोनले तपाईंलाई हेर्न र तपाईंको परिवार र साथीहरूसँग कुरा गर्न दिन्छ, कोठाबाट कहिँ पनि सजिलोसँग। तिनीहरूको दिनको लागि एक मुस्कान लानुहोस्, उनीहरू ठीकठाक छ कि छैन जाँच्नुहोस्, तिनीहरूलाई तपाईं ठीक हुनुहुन्छ भनेर देखाउनुहोस्, र आमने सामने कुराकानी गर्नुहोस् - यात्राको आवश्यकता बिना नै!
एक स्पर्शको साथ, तपाईंको भिडियोफोनले तपाईंको सम्पर्क संसारमा कहिँ पनि भेट्टाउँदछ! हामी प्रत्येक कल बटनलाई निजीकृत गर्दछौं। यदि तपाईंको साथीले आफ्नो मोबाइल, आईप्याड, ट्याब्लेट वा कम्प्युटरमा जवाफ नदिनुभयो भने, तब उसको घर र अफिसको ल्यान्डलाइन जगेडा नम्बरहरू बदल्न कोशिस गर्न सकिन्छ। हामी भ्वाइसमेल र उत्तर मेशिनबाट बच्न यसलाई सेट अप गर्न सक्छौं।
Konnekt सबै गर्छ: सेटअप, निजीकरण, परीक्षण, डेलिभरी, समर्थन ... हामी तपाईका सम्पर्कहरूलाई जान मद्दत गर्दछौं र तिनीहरूको भिडियोलाई अनुकूलित गर्दछौं। मद्दतको लागि वा दूर टाढा परिवर्तनहरू गर्न हामीलाई कल वा ईमेल गर्नुहोस्। हामी कुनै पनि भाषामा बटनहरू र सन्देशहरू निजीकृत गर्दछौं र घण्टी अवधाहरू अनुकूलित गर्दछौं ताकि तपाईं जवाफ दिनको लागि जति सक्दो लामो समय लिन सक्नुहुनेछ… केवल एक टचको साथ।
विश्वसनीय क्यारियरहरूको कलहरू स्वत: जवाफ दिन सकिन्छ, यदि तपाईंलाई उत्तर दिन समस्या भए भने। एक इन्टुसिभ वेबक्याम विपरीत, तपाईं पढ्न र वास्तवमा कसले कल गर्दै थियो हेर्न सक्नुहुन्छ र पूरा दुई-तर्फी भिडियो र अडियो छ।
यो प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ तपाईंको साथीहरू र परिवारलाई भेट्न, र अझ नजिक जब उनीहरू नजिकै न बस्ने। हाम्रो गठिया फोनको साथ, एक्लो महसुस गर्न आवश्यक छैन: तपाईं एक मुस्कान साझा गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको स्थानीय र विदेशी प्रियजनहरूसँग अनुहार सम्बन्धी सम्बन्ध हुनसक्दछ - जतिसुकै तपाईं चाहानुहुन्छ, कुनै पनि समयमा।
Konnekt हातको सीमित प्रयोगको साथ राम्रोसँग काम गर्दछ
गठिया विशिष्ट विशेषताहरू
ठूलो cm 38 सेमी स्क्रीन। होल्डसेट राख्नु हुँदैन। तपाईंको मनपर्ने कुर्सीबाट प्रयोग गर्नुहोस्।
विशाल एक टच कल बटनहरू। अस्थिर हातहरूको लागि महान।
उन्नत टच-स्क्रिनलाई कुनै पनि वस्तु प्रयोग गरेर हल्का प्रेस आवश्यक पर्दछ।
साथीहरू आफ्नो पीसी / म्याकबाट तपाईंको भिडियोफोनमा फोटोहरू देखाउन सक्छन् जब तपाईं कुरा गर्नुहुन्छ। तपाइँ केहि गर्नुहुन्न! बस पछाडि बसेर रमाईलो गर्नुहोस्।
एकल स्पर्शले आमने सामने कल गर्ने प्रयास गर्दछ, त्यसपछि घर / अफिसको ब्याकअप नम्बरहरू पालैपालो।
विश्वसनीय क्यारियरहरूको लागि स्वत: उत्तर विकल्प। शून्य प्रयासको साथ उत्तर।
नयाँ: ओछ्यान वा कुर्सीबाट एक प्रेस कलिंगको लागि पहुँच बटन (वायर्ड वा वायरलेस)।
नयाँ: कल बटनलाई सहयोग गर्नुहोस्: अनुक्रममा5व्यक्तिलाई कल गर्नुहोस्।